နယ်သာလန်နှင့် Golden Visa အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်
ကျွန်ုပ်တို့သည်နယ်သာလန်နိုင်ငံရှိစီးပွားရေးလူ ၀ င်မှုကြီးကြပ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးသည်။
အကောင်းဆုံး နယ်သာလန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency များအတွက်ကိုယ်စားလှယ် နှင့်ရှေ့နေများ နယ်သာလန်နိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်မှုနှင့်အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်များအတွက်ပွဲစားနယ်သာလန်နိုင်ငံရှိနေထိုင်မှုအစီအစဉ်များသည်ဖောက်သည်များ၏ကာကွယ်မှုအတွက်တွဲဖက်လုပ်ဆောင်သည်။
နယ်သာလန်နိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်စားလှယ်များ၏နေထိုင်မှုသည်နယ်သာလန်နိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်၊ နယ်သာလန်ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များမှနေထိုင်မှု၊ နယ်သာလန်ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်မှ Residency၊ နယ်သာလန်ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်ဒုတိယနေထိုင်မှု၊ နယ်သာလန်နိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် dual Residency၊ , နယ်သာလန်နိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်၊ နယ်သာလန်နိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ယာယီနေထိုင်မှု၊ နယ်သာလန်နိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နေထိုင်မှု၊ နယ်သာလန်ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များဖြင့်နေထိုင်မှု၊ နယ်သာလန်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသား၊ နယ်သာလန်နိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များဖြင့်နိုင်ငံသား၊ နယ်သာလန်နိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသား၊ နယ်သာလန်နိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ နယ်သာလန်နိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်နှင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ နယ်သာလန်နိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်နှင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ နယ်သာလန်နိုင်ငံရှိစီးပွားရေးနိုင်ငံသားအစီအစဉ်၊ နယ်သာလန်နိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ Citize နယ်သာလန်နိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များ၊ နယ်သာလန်နိုင်ငံတွင်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ နယ်သာလန်နိုင်ငံတွင်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ဒုတိယနယ်သာလန်နိုင်ငံ၊ နယ်သာလန်နိုင်ငံတွင်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ နယ်သာလန်နိုင်ငံရှိနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ နယ်သာလန်နိုင်ငံရှိနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ နယ်သာလန်နိုင်ငံဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ နယ်သာလန်နိုင်ငံတွင်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ နယ်သာလန်နိုင်ငံတွင်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အစီအစဉ်၊ နယ်သာလန်နိုင်ငံမှရွှေဗီဇာ၊ နယ်သာလန်နိုင်ငံမှရွှေဗီဇာ၊ နယ်သာလန်နိုင်ငံမှရွှေဗီဇာအစီအစဉ်များ၊ နယ်သာလန်နိုင်ငံတွင်ရွှေဗီဇာအစီအစဉ်၊ နယ်သာလန်နိုင်ငံတွင်နယ်သာလန်နိုင်ငံမှရွှေဗီဇာ၊ နယ်သာလန်နိုင်ငံမှနိုင်ငံသားနှင့်ရွှေဗီဇာ၊ နယ်သာလန်နိုင်ငံတွင်နေထိုင်ခွင့်နှင့်ရွှေဗီဇာ၊ နယ်သာလန်နိုင်ငံမှရွှေဗီဇာနိုင်ငံများ၊ နယ်သာလန်နိုင်ငံရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်၊ နယ်သာလန်နိုင်ငံရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်များ။
နောက်ထပ်အထောက်အပံ့ဖြင့်နယ်သာလန်နိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်သင်၏ Residency အားလုံးအတွက်“ 1 stop solutions” ။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်အတွက်နယ်သာလန်နိုင်ငံတွင်အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု - ယူရို ၁,၂၅၀,၀၀၀ (နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်)
နယ်သာလန်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency များအတွက်အခြေခံအသေးစိတ်
ယူရို ၁,၂၅၀,၀၀၀ (နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်)
နယ်သာလန်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency များအတွက်အပြောင်းအလဲနဲ့အချိန်
နယ်သာလန်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency အတွက်ဖောက်သည်ထောက်ခံမှု
ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်း နေထိုင်ခွင့် နယ်သာလန်များအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်စားလှယ်များကသည် နှင့် နေထိုင်ခွင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် ရှေ့နေများ နယ်သာလန်ဘို့ ဖောက်သည်များနှင့်နယ်သာလန်ရှိသူတို့၏မိသားစုများကိုနယ်သာလန်နိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုအထောက်အပံ့၊ နယ်သာလန်မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်အခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအခွင့်အလမ်းများကိုနိုင်ငံ ၃၇ နိုင်ငံမှထောက်ပံ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများသည်နယ်သာလန်နိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသို့မဟုတ်နယ်သာလန်မှ Golden Visa ဖြင့်နေထိုင်ခွင့်သို့မဟုတ်နယ်သာလန်နိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသို့မဟုတ်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ကိုကန့်သတ်ထားသည်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်နယ်သာလန်နိုင်ငံမှအကောင်းဆုံးအိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခွင့်အလမ်းများကိုလည်းကူညီသည်။ နယ်သာလန်သို့မဟုတ်ကမ်းလွန်၊ နယ်သာလန်ရှိလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များနှင့်အခြားအရာများစွာပါဝင်သည်။
ကျနော်တို့တတ်နိုင်သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများကနေထိုင်ရာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့တတ်နိုင်မှတဆင့်နယ်သာလန်အဘို့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကုမ္ပဏီ နယ်သာလန်နိုင်ငံအတွက်၊ နယ်သာလန်အတွက်တတ်နိုင်သမျှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလူ ၀ င်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေ၊ နယ်သာလန်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံများကတတ်နိုင်သောနေထိုင်ခွင့်၊ နယ်သာလန်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများမှတတ်နိုင်သောနေထိုင်ခွင့်နှင့်နယ်သာလန်အတွက်တတ်နိုင်သောလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအကြံပေးကုမ္ပဏီများ
နယ်သာလန်နိုင်ငံမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်။
နယ်သာလန်နိုင်ငံရှိနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ရွှေဗီဇာ။
နိုင်ငံသား ၃၇ နိုင်ငံမှနယ်သာလန်နိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု။
နယ်သာလန်နိုင်ငံမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်။
နယ်သာလန်နိုင်ငံမှစီးပွားရေး ၁၀၆ နိုင်ငံသို့စီးပွားရေးအခြေပြုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး။
နယ်သာလန်နိုင်ငံရှိနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ရွှေဗီဇာအစီအစဉ်များ။
နယ်သာလန်နိုင်ငံမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု။
နယ်သာလန်နိုင်ငံမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အစီအစဉ်များ။
နယ်သာလန်နိုင်ငံမှနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံအထိစီးပွားရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအစီအစဉ်များ။
နယ်သာလန်ရှိအိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများကနယ်သာလန်နိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများမှပြန်လည်အမြတ်အစွန်းရရှိသင့်သည်ဟူသောရှုထောင့်နှင့်အညီပံ့ပိုးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်နယ်သာလန်နိုင်ငံရှိအကောင်းဆုံးအိမ်ခြံမြေဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီအနည်းငယ်နှင့်ကောင်းမွန်သောလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိပြီးနယ်သာလန်နိုင်ငံရှိကောင်းသောနေရာများတွင်အကောင်းဆုံးအမြတ်အစွန်းများရရှိထားသည်။
သိရန်လိုအပ် - ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်နယ်သာလန် Residency
နယ်သာလန်နိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေ၏နေထိုင်မှုသည်နယ်သာလန်နိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်သင်၏အောင်မြင်သော Residency အတွက်အသေးစိတ်စာရွက်စာတမ်းအထောက်အပံ့များကိုပေးလိမ့်မည်။ နယ်သာလန်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏စံဝန်ဆောင်မှုများတွင် -
ကျွန်ုပ်တို့သည် Residency ကိုနယ်သာလန်နိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်နယ်သာလန်နိုင်ငံရှိ Residence Permit ရရှိရန်နှင့်ငြင်းဆန်မှုအန္တရာယ်ကိုလျှော့ချရန်အတွက် Residency ကိုအကြံပြုခြင်းမပြုမီအစီရင်ခံစာပြင်ဆင်ရန်ကန ဦး Due Diligence ကိုပြုလုပ်သည်။
နယ်သာလန်နိုင်ငံအတွက်လုံ့လဝီရိယရှိရှိလေ့လာခြင်းအစီရင်ခံစာအပေါ် အခြေခံ၍ ပိုမိုကောင်းမွန်သောအောင်မြင်မှုအတွက်အခြားအစီအစဉ်များကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။
နယ်သာလန်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလျှောက်ထားခြင်းဖြင့်သင်၏ Residency နှင့်အတူရှေ့သို့လျှောက်လှမ်းနိုင်ရန်အတွက် client နှင့်မိသားစု ၀ င်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်များကိုစစ်ဆေးရန်လိုအပ်သည်။
စာရွက်စာတမ်းများဘာသာပြန်ခြင်းနှင့်အက်စ်တယ်လ်နယ်သာလန်နိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလျှောက်လွှာတင်ခြင်း။ နယ်သာလန်နိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ရွှေဗီဇာဖြင့် Residency အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အထူးရှေ့နေများသည်ဖြည့်စွက်ပုံစံများနှင့်စာရွက်စာတမ်းများကိုအထောက်အကူပြုလိမ့်မည်။
သင်နှင့်သင်၏မိသားစုသည်နယ်သာလန်နိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလျှောက်ထားခြင်းဖြင့် Residency အတွက်မှတ်တမ်းတင်ပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက်၎င်းကိုနယ်သာလန်၏သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ဖြည့်ပါလိမ့်မည်။
နယ်သာလန်နိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency လျှောက်လွှာကိုအတည်ပြုပြီးသည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သတင်းကောင်းကိုသင်နှင့်အခြားအထောက်အပံ့များအတွက်စတင်ပြင်ဆင်နေသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်နယ်သာလန်နိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများမှအောက်ဖော်ပြပါပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်နယ်သာလန်နိုင်ငံရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအား Residency ကိုထောက်ပံ့ခြင်းမပြုပါ။
နေထိုင်ခွင့် နယ်သာလန်များအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများက ကုန်သည်များသို့မဟုတ်နယ်သာလန်နိုင်ငံမှလက်နက်များနှင့်ခဲယမ်းမီးကျောက်ဖြန့်ဖြူးသူများကိုကမ်းလှမ်းခြင်းမရှိပါ။
နေထိုင်ခွင့် နယ်သာလန်များအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များအားဖြင့်ဖြစ်သည် နယ်သာလန်နိုင်ငံတွင်နည်းပညာဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်ခြင်းသို့မဟုတ်နယ်သာလန်သို့ဖြစ်စေ၊ သို့ဖြစ်စေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များကိုစက်မှုဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်ခြင်းအတွက်ကမ်းလှမ်းခြင်းမရှိပါ။
နေထိုင်ခွင့် နယ်သာလန်များအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံသည် နယ်သာလန်၌တရားမဝင်သောသို့မဟုတ်ရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများအတွက်ကမ်းလှမ်းခြင်းမရှိပါ။
နေထိုင်ခွင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအထောက်အပံ့ဖြင့် နယ်သာလန်ဘို့ နယ်သာလန်ရှိမျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုကိုင်တွယ်သူတစ် ဦး ချင်းအတွက်မဟုတ်ပါ။
နေထိုင်ခွင့် နယ်သာလန်များအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများက နယ်သာလန်နိုင်ငံတွင်အန္တရာယ်ရှိသောသို့မဟုတ်အန္တရာယ်ရှိသောဇီဝဗေဒဆိုင်ရာသို့မဟုတ်နျူကလီးယားလက်နက်များရောင်းဝယ်သောလုပ်ငန်းများအတွက်မဟုတ်ပါ
နေထိုင်ခွင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်အားဖြင့် နယ်သာလန်နိုင်ငံသို့ကုန်သွယ်မှု၊ နယ်သာလန်တွင်သိုလှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်လူ့ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းတို့တွင်လုပ်ကိုင်နေသောနယ်သာလန်နိုင်ငံများရှိလူတစ် ဦး ချင်းစီကိုထောက်ပံ့မှုမရပါ။
နေထိုင်ခွင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် နယ်သာလန်ဘို့ တရားမဝင်မွေးစားအေဂျင်စီများအတွက်မဟုတ်ပါဘူး။
နေထိုင်ခွင့် ပရိုဂရမ်ဝန်ဆောင်မှု နယ်သာလန်ဘို့ နယ်သာလန်ရှိဘာသာရေးကိုးကွယ်မှုများနှင့်၎င်းတို့၏ပရဟိတလုပ်ငန်းများအတွက်မဟုတ်ပါ
နေထိုင်ခွင့် အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများက နယ်သာလန် နယ်သာလန်နိုင်ငံရှိညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုသူများအားပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏နေထိုင်ခွင့် နယ်သာလန်အတွက်ရှေ့ရပျ နယ်သာလန်နိုင်ငံရှိမူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုလုပ်ငန်းတွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုမထောက်ပံ့ပါ
“ အရေးကြီးတဲ့သတိပေးချက် : MM Solutions INC သည်နယ်သာလန်နိုင်ငံရှိဖောက်သည်များနှင့်၎င်းတို့၏ KYC အတွက် AML စာရွက်စာတမ်းများကိုသေချာစွာစစ်ဆေးရန်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောကြိုတင်ကာကွယ်ရေးကိုယူထားသည်။ သို့သော်နယ်သာလန်အာဏာပိုင်များကလျှောက်လွှာကိုအတည်ပြုရန်ငြင်းပယ်မှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့တွင်တာဝန်ရှိသည်။ နေထိုင်ခွင့် နယ်သာလန်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်ဖြစ်သည်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Residency မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွေ့အကြုံများနှင့်နယ်သာလန်နိုင်ငံ၏တရားဝင်လိုအပ်ချက်များကို အခြေခံ၍ အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းချက်များကိုပြုလုပ်သည်
နယ်သာလန်နိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ Residency သည်နယ်သာလန်အတွက်အကောင်းဆုံးအောင်မြင်နိုင်သောနှုန်းဖြင့်စျေးအသက်သာဆုံးစျေးနှုန်းကိုကမ်းလှမ်းသည်။
ဖောက်သည်များနှင့်သူတို့၏မိသားစုများကိုနယ်သာလန်သို့ထောက်ပံ့ပေးသည့်နယ်သာလန်သို့ Dual Residency အတွက်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံရှိခဲ့သည်။
ဖောက်သည်များအားပံ့ပိုးမှုပေးသောနယ်သာလန်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့ရွက်များနှင့်နယ်သာလန်အတွက်ဥပဒေအကျိုးဆောင်များ၏အတွေ့အကြုံရှိသော Residency ။
နယ်သာလန်အတွက်သင်၏ Residency မတိုင်မီနှင့်ခွင့်ပြုချက်အပြီးတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အကြီးတန်းအဖွဲ့ ၀ င်သည်နယ်သာလန်နိုင်ငံအတွက်စီးပွားရေးသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအထောက်အပံ့များအတွက်ဖြစ်သည်
ကျွန်ုပ်တို့သည် Residency တွင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံရှိပြီးနယ်သာလန်နိုင်ငံအပါအ ၀ င်အကောင်းဆုံး ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်ကမ္ဘာအ ၀ ှမ်းမှဖောက်သည်များအားကူညီခြင်း။
ဖြစ်နိုင်လျှင်နယ်သာလန်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်သင်၏ Residency ပျက်ကွက်ပါကကျွန်ုပ်တို့ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသောနိုင်ငံပေါင်း ၃၆ ခုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အစီအစဉ်ခနှင့်အဆင်သင့်ဖြစ်သည်။
နယ်သာလန်မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency များအတွက်ကုန်ကျစရိတ်တွက်ချက်
နေထိုင်မှုအတွက်ကုန်ကျစရိတ်ကိုနယ်သာလန်နိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်တွက်ချက်ရန်မိသားစု ၀ င်များနှင့်သူတို့၏အသက်အရွယ်များကိုအသေးစိတ်ဖြည့်ပါ။ နယ်သာလန်နိုင်ငံတွင် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူအမြောက်အများကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစွာဖြင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သော ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးနိုင်သည်။ နယ်သာလန်နိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်နှင့် Residency အတွက်ကုန်ကျစရိတ်များအပါအ ၀ င်အခြားကုန်ကျငွေများပါဝင်သည်။
ပုံစံ ဗီဇာ နယ်သာလန်ဘို့
သင်သည်သင်၏မိသားစုနှင့်အတူနယ်သာလန်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်ပြောင်းရွှေ့ရန်စီစဉ်နေပါကကျွန်ုပ်တို့သည်နယ်သာလန်နှင့်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အနေဖြင့်၊ နယ်သာလန်၌တတ်နိုင်သောစျေးနှုန်းဖြင့်သင်လိုအပ်မည့်အချိန်နှင့်အခြား ၀ န်ဆောင်မှုများစွာပေးအပ်ရန်ရှိပါသည်။
နယ်သာလန်နိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံခြင်းဖြင့် Residency မှလွဲ၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်နယ်သာလန်နိုင်ငံတွင်စီးပွားရေး၊ အိုင်တီနှင့် HR ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးသည်။ နယ်သာလန်နိုင်ငံမှအခြားအတိုင်ပင်ခံများကကျွန်ုပ်တို့အားနယ်သာလန်နှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံအတွက်တစ်နေရာတည်းတွင်ဆိုင်ဖွင့်ပေးသည့်ထီးတစ်ချောင်းအောက်တွင်သင်ရှာမရနိုင်ပါ။
မိသားစုများ၊ တစ် ဦး ချင်းစီနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုနယ်သာလန်နိုင်ငံအတွက်သူတို့၏ရည်မှန်းချက်များနှင့်ရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်ရန်ကူညီရန်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံနှစ်ပေါင်းများစွာနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံ၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများ၊ အတိုင်ပင်ခံများနှင့်နယ်သာလန်နိုင်ငံများနှင့်နိုင်ငံတကာမှအကူအညီများဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များ Residency ကို ကျော်လွန်၍ နယ်သာလန်နိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းအားဖြင့်ကူညီသည်။
ငါတို့သည်သင်တို့ကိုကူညီနိုငျ နယ်သာလန်၌ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ရန် or Offshore နှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံ (နယ်သာလန်နိုင်ငံတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ရန်ကုန်ကျစရိတ်သည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ပို၍ ဈေးချိုသည်။ )
နယ်သာလန်သို့ပြောင်းရွှေ့အခြေချမည့်မည်သည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူမဆိုလိုအပ်လိမ့်မည် နယ်သာလန်အတွက်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဏ်အကောင့် နယ်သာလန်ရှိကုမ္ပဏီဘဏ်စာရင်းနှင့်လည်းကမ်းလွန်ဘဏ်စာရင်းများကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ကူညီနိုင်သည်။
Incase သင်အဘို့, နယ်သာလန်အတွက်တိုင်ပင်လိုအပ်ပါတယ် နယ်သာလန်အတွက်ဒီဂျစ်တယ်ငွေပေးချေမှုဖြေရှင်းချက် နယ်သာလန်နိုင်ငံရှိရိုးရာသို့မဟုတ် fintech ငွေပေးချေမှုတံခါးပေါက် (သို့) crypto ဖြေရှင်းချက်များကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့ကိုအသိပေးပါ။
မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency ပြီးနောက် သင်ဖို့စီစဉ်ထားလျှင်နယ်သာလန် နယ်သာလန်နိုင်ငံရှိလက်ရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုဝယ်ယူခြင်းဖြင့်စီးပွားရေးစတင်ရန် နယ်သာလန်အတွက်လက်ငင်းစတင်ဘို့။
နယ်သာလန်ရှိ HR ဝန်ဆောင်မှုများ
ကျွန်တော်တို့၏ နယ်သာလန်ရှိလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ကုမ္ပဏီ အမြန်စုဆောင်းမှုနှင့်အတူသင်ကူညီနိုင်သည်။ သင်လည်းလုပ်နိုင်တယ် နယ်သာလန်အတွက်နေရာလွတ် post အခမဲ့ဖြစ်သည်။
နယ်သာလန်အတွက် Virtual ဖုန်းနံပါတ်များ
နယ်သာလန်နိုင်ငံအတွက်စီးပွားရေးတယ်လီဖုန်းစနစ်များ နယ်သာလန်များအတွက်ကို virtual နံပါတ်များ 102 နိုင်ငံများနှင့် 291 မြို့ကြီးများ။
စာရင်းကိုင်, နယ်သာလန်အတွက်ကြောင့်လုံ့လဝီရိယနှင့် အများကြီးပို.
နယ်သာလန်၌ Virtual ရုံးလိပ်စာ
နယ်သာလန်၌ setup ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်း
နယ်သာလန်မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency ပြီးနောက်, အတွက် setup ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်း နယ်သာလန်.
နယ်သာလန်နိုင်ငံတွင်ဖော်ပြထားသော IT ဖြေရှင်းနည်းများကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်
နယ်သာလန်၌ Web ဒီဇိုင်း
နယ်သာလန်နိုင်ငံတွင် Web ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
နယ်သာလန်အတွက် Blockchain ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ
နယ်သာလန်ရှိ App Development
နယ်သာလန်အတွက် software ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
နယ်သာလန်နိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက်ရှေ့နေများ
ကျွန်ုပ်တို့သည်နယ်သာလန်နိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာဖြေရှင်းမှုဖြင့်တရား ၀ င်နေထိုင်မှုကိုပေးစွမ်းသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအတွက်အောင်မြင်မှုသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ နယ်သာလန်နိုင်ငံအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ခေါင်းဆောင်များဖြစ်သည်။ နယ်သာလန်နိုင်ငံအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီသည်နယ်သာလန်နိုင်ငံတွင်အကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးကိုယ်စားလှယ်များရှိသည်။ နယ်သာလန်တစ် ဦး ချင်းစီနှင့်၎င်းတို့၏မိသားစုများအတွက်ရှင်းလင်းသောမဟာဗျူဟာမြောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြေရှင်းချက်။ နယ်သာလန်နိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအဖွဲ့၏ကျွန်ုပ်တို့၏ Residency သည် Client ၏အောင်မြင်မှုအတွက်ထုံးစံအတိုင်းဖြေရှင်းမှုများကိုပေးသည်။
သင်၏မိသားစု ၀ င်များ (ကလေးများ၊ ဇနီး၊ မိဘများ) သည်နယ်သာလန်နိုင်ငံတွင်နေထိုင်ခွင့်ခွင့်ပြုချက်ရှိသည်၊
နယ်သာလန်နိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများက Residency မှသင်၏ကိုယ်စားတရားဝင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအတွက်နယ်သာလန်အတွက်ရှေ့နေသည်လိုအပ်သည်။ သင်သည်နယ်သာလန်သို့ရောက်နေလျှင်သို့မဟုတ်နယ်သာလန်သို့သွားရောက်ရန်စီစဉ်ထားပါကကျွန်ုပ်တို့အားသင်၏ရှေ့နေအားဤတွင်ရယူနိုင်ပါသည်။
ရှေ့နေပါဝါရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့အပိုမယူပါ။ နယ်သာလန်နိုင်ငံတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုအဝေးမှစတင်ရန်စီစဉ်ပါကနယ်သာလန်နိုင်ငံတွင်အသုံးပြုရန်သင်၏ရှေ့နေအားတရားဝင်တရားဝင်ဖြစ်သင့်သည်။ သင်၏နေထိုင်ရာနိုင်ငံပေါ်မူတည်ပြီးနယ်သာလန်ကောင်စစ်ဝန်ရုံးကအက်ပလီကေးရှင်းကိုတရားဝင်ဖြစ်စေတရားဝင်ဖြစ်စေသင့်သည်။
မကြာခဏမေးသောမေးခွန်းများ - နယ်သာလန်နိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်
နယ်သာလန်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်းကိုနယ်သာလန်၏စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ စီးပွားရေး၊ အိမ်ခြံမြေ၊ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်များစသည်ဖြင့်နယ်သာလန်၏နေထိုင်မှုကိုရရှိနိုင်သည်ဟုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ နယ်သာလန်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ရန်လျှောက်ထားသည်၊ နယ်သာလန်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နေထိုင်သည်။ နယ်သာလန်နိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်နေထိုင်ခွင့်၊ နယ်သာလန်ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများကအကောင်းဆုံးနေထိုင်ခွင့်၊ နယ်သာလန်ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများနှင့်အကောင်းဆုံးနေထိုင်ခွင့်၊ နယ်သာလန်နိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံများကအကောင်းဆုံးနေထိုင်ခွင့်၊ နယ်သာလန်ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအေးဂျင့်များကအကောင်းဆုံးနေထိုင်ခွင့်နှင့်အကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများမှထောက်ပံ့ခြင်း နယ်သာလန်၌တည်၏။
နယ်သာလန်နိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်နေထိုင်ခွင့် နယ်သာလန်နိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်စားလှယ်များနေထိုင်ခွင့် နယ်သာလန်နိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများ၏နေထိုင်မှု | နယ်သာလန်နိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများမှနေထိုင်ခွင့် | နယ်သာလန်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံများကနေထိုင်မှု
နယ်သာလန်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုနယ်သာလန်စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နယ်သာလန်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုစီးပွားရေး၊ အိမ်ခြံမြေလုပ်ငန်း၊ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်စသည်ဖြင့်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်နိုင်သည်။ နယ်သာလန်နိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ နယ်သာလန်နိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုနယ်သာလန်နိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများကအကောင်းဆုံးနိုင်ငံသားအဖြစ်ပြဌာန်းပြီးနယ်သာလန်နိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာရှေ့နေများကနိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ နယ်သာလန်နိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံများမှနိုင်ငံသားအဖြစ်လျှောက်ထားခြင်း။ အကောင်းဆုံးမှာနယ်သာလန်ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်စားလှယ်များနှင့်နယ်သာလန်နိုင်ငံရှိလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများကအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
စျေးနှုန်းချိုသာသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုများ နယ်သာလန်နိုင်ငံအတွက်လူကြိုက်များသောလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ နယ်သာလန်ရှိစျေးချိုသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူ ၀ င်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ နယ်သာလန်ရှိစျေးချိုသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ နယ်သာလန်နိုင်ငံအတွက်စျေးချိုသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူ ၀ င်မှုကြီးကြပ်ရေးမှူး နယ်သာလန်အတွက်တတ်နိုင်သောလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကုမ္ပဏီများ
နယ်သာလန်နိုင်ငံ၏ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုနယ်သာလန်နိုင်ငံစီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ အိမ်ခြံမြေ၊ စီးပွားရေး၊ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်များစသည်တို့ဖြင့်တရား ၀ င်နိုင်ငံသားအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းစသည်တို့ကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ နယ်သာလန်သို့ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်လျှောက်ထားပါ၊ နယ်သာလန်နိုင်ငံအတွက်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ် ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ နယ်သာလန်နိုင်ငံရဲ့အကောင်းဆုံးဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများ၊ နယ်သာလန်နိုင်ငံရဲ့အကောင်းဆုံးနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများနှင့်နယ်သာလန်နိုင်ငံအတွက်အကောင်းဆုံးဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အတိုင်ပင်ခံများ၊ နယ်သာလန်နိုင်ငံရဲ့အကောင်းဆုံးနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်နယ်သာလန်နိုင်ငံမှာအကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအကြံပေးကုမ္ပဏီများမှတစ်ဆင့်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။
နယ်သာလန်နိုင်ငံအတွက်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဝန်ဆောင်မှု နယ်သာလန်နိုင်ငံရှိနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုယ်စားလှယ်များ နယ်သာလန်နိုင်ငံရှိနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများ နယ်သာလန်နိုင်ငံရှိနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများ နယ်သာလန်နိုင်ငံအတွက်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်
နယ်သာလန်နိုင်ငံရှိရွှေဗီဇာဆိုသည်မှာနယ်သာလန်နိုင်ငံ၏စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်များ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ အိမ်ခြံမြေများစသည်တို့ဖြင့်နယ်သာလန်နိုင်ငံ၏နေထိုင်မှုခွင့်ပြုချက်ရယူခြင်းစသည်တို့ကိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုထားသည်။ နယ်သာလန်သို့ရွှေဗီဇာလျှောက်ထားခြင်း၊ နယ်သာလန်နိုင်ငံအတွက်အကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာရှေ့နေများ၊ နယ်သာလန်နိုင်ငံမှအကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာရှေ့နေများနှင့်နယ်သာလန်နိုင်ငံအတွက်အကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာအကြံပေးများ၊ နယ်သာလန်နိုင်ငံရှိအကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာကိုယ်စားလှယ်များနှင့်နယ်သာလန်နိုင်ငံရှိအကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများမှတစ်ဆင့်နယ်သာလန်နိုင်ငံအတွက်ရွှေဗီဇာဝန်ဆောင်မှုများ
နယ်သာလန်နိုင်ငံအတွက်ရွှေဗီဇာဝန်ဆောင်မှုများ | နယ်သာလန်နိုင်ငံရှိရွှေဗီဇာကိုယ်စားလှယ်များ နယ်သာလန်နိုင်ငံရှိရွှေဗီဇာရှေ့နေများ နယ်သာလန်နိုင်ငံရှိရွှေဗီဇာရှေ့နေများ နယ်သာလန်အတွက်ရွှေဗီဇာအတိုင်ပင်ခံ
နယ်သာလန်ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက်အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကဘာလဲ။
နယ်သာလန်နိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက်အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည် EUR 1,250,000 (နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်) ဖြစ်သည်။
နယ်သာလန်နိုင်ငံအတွက် Residency အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်တရားဝင်အထောက်အပံ့ပေးပါသလား။
ဟုတ်ပါတယ်, နယ်သာလန်ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေနှင့်နယ်သာလန်ရှိအေးဂျင့်များသည်နယ်သာလန်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့် Residency ကိုအထောက်အပံ့ပေးသည်။
နယ်သာလန်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်၏ကုန်ကျစရိတ်နှင့်နယ်သာလန်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုအပ်ချက်များကြောင့် Residency သည်အမြတ်အစွန်းမြင့်မားသောလူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်းအတွက်ဖြစ်သည်။ နယ်သာလန်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခကိုသာပေးဆောင်သည်၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြေရှင်းမှုဖြင့် Residency အတွက်အခြားအထောက်အပံ့များစွာပေးသည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်သည်မည်သည့်နိုင်ငံတွင်မဆိုနိုင်ငံသားများအသုံးပြုနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်အာရှမှနယ်သာလန်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ အာဖရိကမှနယ်သာလန်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ ဥရောပမှနယ်သာလန်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ တောင်အမေရိကမှနယ်သာလန်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ မလေးရှားမှနယ်သာလန်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်မှု၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှနယ်သာလန်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ အင်ဒိုနီးရှားမှနယ်သာလန်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ သီရိလင်္ကာမှနယ်သာလန်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်မှု၊ နီပေါမှနယ်သာလန်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency၊ အိန္ဒိယမှနယ်သာလန်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency နှင့် Residency ယူအေအီးကနေနယ်သာလန်မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလမ်းညွှန်မှုအားဖြင့် Professional ကနေထိုင်မှု နယ်သာလန်ဘို့
နယ်သာလန်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency အတွက်အရေးကြီးသောဝေါဟာရများ
Easy Expat: Expatriate အတွက်လမ်းညွှန်၊ Expatriation,
Holland တွင်အလုပ်လုပ်ခြင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များ (နယ်သာလန်)
နယ်သာလန်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များအနေဖြင့်အမျိုးမျိုးသော status ကိုခြုံငုံသုံးသပ်
အာရပ်အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေခြင်း - အလုပ်အခမဲ့တင်ခြင်း၊ အခမဲ့ပြန်လည်စတင်ခြင်း,
Jo (ခ) အန္နအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း & ဘဝနည်းပြ
link ကိုမှ နယ်သာလန်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာန နယ်သာလန်နိုင်ငံရှိလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးကိုအရှိန်အဟုန်မြှင့်ရန်မူဝါဒချမှတ်ရန်တာ ၀ န်ရှိသည်